Izibuko zelanga zeentaba | Amadoda aQinisekileyo
UAlicia tomero | | Ukunyamekela, yokuPhila
Izibuko zelanga zeentaba Yinto ebalulekileyo ukukhusela amehlo kwizinto ezinobungozi, ezinjengemitha ye-ultraviolet, umoya kunye nawo nawuphina amasuntswana othuli okanye izinambuzane ezinokuxhonywa.
Ayinguye nabani na, kufuneka bathobele ngohlobo lokunyuka intaba oya kuziqhelisa, Ezintofontofo, ezinqabileyo nezomeleleyo, kunye nokuthobela uyilo olulungele ubuso bakho. Kwindoda enesitayile siyakucebisa ukuba ungazikhetha njani ezona zibuko zintle zentaba.
1 Iimpawu ngokubanzi zezibuko zelanga zeentaba
2 Kutheni izibuko zelanga zibaluleke kangaka ezintabeni?
3 Iingxaki ezinokubangela xa zingasetyenziswanga
Iimpawu ngokubanzi zezibuko zelanga zeentaba
Kubalulekile ukuba ukhethe uhlobo lweiglasi ezihambelana nodidi lomdlalo oza kuwuqhuba. kwaye yintoni ukubonakaliswa okusisigxina amehlo akho aza kuthotywa ukuze ukhuseleke kangangoko kunokwenzeka. Ungalibali ukuba sinokufumana iiglasi ezineadaptha ebonakalayo kwimarike ukuba sifuna ukufumana iilensi zokumisela.
Ngokubanzi, ezona zigogo zeentaba zezona zibambe kakuhle, zona Bayakwazi ukutshintsha ithoni ngokuxhomekeke kubungakanani bokukhanya ityhilwe kuyo kwaye ine unyango anti-inkungu. Kuya kufuneka ukuba baphawule inqanaba lesi-4 kwaye licociwe kwaye lifotochromic.
Iilensi zezinye zezinto eziphambili. Kuya kufuneka ukhethe ilensi enodidi oluphakathi ko-0 no-4, eli nqanaba liya kusivumela ubungakanani bokufakwa kokukhanya okubonakalayo okunokudlulisa. Ukukunika umbono, inqanaba le-0 yilensi ecace gca kwaye inqanaba lesi-4 limnyama kakhulu, lilungele indawo zeentaba ezinekhephu kunye nemimandla yasemanzini eneembonakalo ezinkulu zelanga. Akungombuzo wokuba nobumnyama obukhulu kwiilensi, kodwa oko kuza nolona nyango lukhulu lwe-UV.
Imibala ingahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lwemfuno, ze umbala oluhlaza zisivumela ukuba sifake imibala ngokuchanekileyo. Amdaka Basinceda ekucoceni imitha eluhlaza okwesibhakabhaka ngcono kwaye sandise ubunzulu bentsimi. Ezityheli Zilungele iintsuku ezinamafu kunye nokukhanya okuncinci, kodwa kufuneka zibandakanye nonyango oluchasene ne-UV. Ngwevu banika ukufana ekukhanyeni kwaye bayayihlonipha imibala yendalo.
Iilensi zePhotochromic: Zilungile kwimidlalo enje ngebhayisikile, njengoko zilungelelanisa kakuhle kakhulu ekukhanyeni, ngaphandle kokuqaphela indawo ezinamandla zokukhanya ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Iilensi ezigqityiweyo: Banceda ukonyusa umgangatho kunye nombala wendalo, benza isiphumo sokulwa nokuqaqamba kwemimandla enamanzi nekhephu.
Kuya kufuneka ukhethe phakathi kweiglasi ezikhanyayo nezitofotofo ezihambelana nobume bobuso bakho, zininzi iimodeli kwintengiso ezinokukuchukumisa.
Ngomoya olungileyo: Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukungena komoya olungileyo phakathi kweiglasi kunye nobuso bakho, ukuze ukungonwabi kweelensi kungabonakali. Oku kudla ngokwenzeka kwiindawo ezinomswakama ophezulu nasebusika.
Ngezinto ezilungileyo zecala: Ezi zinto ziyasebenza kwaye zibambe kakuhle entloko. Ukuba uqhuba imidlalo ezintabeni ezinje ngokukhwela okanye ukukhwela ibhayisikile, kubalulekile ukuba iitempile zihlale zizinzile. Ukulungiselela le nto kukho izinto zokubambelela ezingaphezulu ezinje ngemitya.
Kutheni izibuko zelanga zibaluleke kangaka ezintabeni?
Izibonda kufuneka zisikhusele kwinto eyingozi njengemitha ye-UVB. Kuya kufuneka uyazi ukuba yonke i-1000 m yokuphakama onyuka intaba, imitha ye-UVB inyuka nge-10%. Kukho izinto kwindalo ezonyusa inqanaba lemitha, njengekhephu, kuba ibonisa i-80 ukuya kwi-90% yemitha, ukukunika umbono, indawo engenalo ikhephu ibonakalisa i-20%.
Imitha yelanga iphindaphindwe nge-1,5 ukuya kwi-2000 m ngaphezulu komphakamo wolwandle, kunye ne-2,5 ukuya ku-4000 m. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iya kuthambeka ngakumbi kuxhomekeke kwixesha lonyaka nakwimeko yelanga. Imitha iphezulu kakhulu ekwindla kunasentwasahlobo, inyuka ukuya kwi-25% ngaphezulu ngenxa yokukhula kocwecwe lwe-ozone.
Iingxaki ezinokubangela xa zingasetyenziswanga
Ezona mpawu zixhaphakileyo zihlala zingenakonakala macular, kunye nokuguga ngaphambi kwexesha kuzo zonke izicwili eziyinxalenye yamehlo.
Isiseko: Kukukhula okungaqhelekanga kwezihlunu ezicaphukisayo ezenza umaleko omncinci wepinki ucaphukise kwaye ulingane Iyacaphukisa.
Isifo "esimhlophe ngaphandle" Esi sifo sihlala sivela ngakumbi xa kusenziwa imidlalo ebandayo kakhulu, ifikelela kwiqabaka yeenkophe ngenxa yamaqondo obushushu asezantsi, kwaye ibangele ukulahleka kombono, ukufotokopofiya kunye necrosis engenakuphinda ibuye.
I-Photokeratitis okanye i-ophthalmia yekhephu, ngenxa yokuvezwa ixesha elide kwimitha ye-UVB ebangela ukhukuliseko lweeseli ezigqume inwebu yeliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Izibuko zelanga zentaba
Izipho zobudoda kakhulu ukuphatha ngcono ukuvalelwa